Manchter City oo la wareegtay hogaanka horyaalka kaddib guul ay ka gaartay Bournemouth iyo manchester United oo guul dirqi ah gaartay – Gool FM
Kooxda Inter Milan oo bedelka Weeraryahankeeda Lautaro Martinez ka dhex aragta Arsenal
Halkee ayuu doonayaa Philippe Coutinho inuu ka ciyaaro?
Juventus oo mid ka mid ah xiddigaheeda u soo bandhigtay Chelsea si ay kaga hesho Jorginho
Taageerayaasha Real Madrid oo cod ku go’aamiyey kooxda ku guuleysan karta horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan
“Si wadajir ah ayaan u dabaal degi doonaa maalinta ay noqotoba” – Jürgen Klopp
“Real Madrid barri ayey la soo saxiixan doontaa Mbappé haddii ay dhacdo hal arrin” – Florentino Pérez
Ronaldo Nazario oo shaaciyey shanta xiddig ee uu daawashadooda ku raaxaysto, Messi oo hoggaaminaya, CR7 oo ka maqan & Hal laacib oo uu ka soo qaatay Premier League
Eduardo Camavinga oo kala doortay Kooxaha Real Madrid, Manchester United iyo Liverpool
Kooxda Juventus oo ka fiirsanaysa inay ku soo biirto tartanka loogu jiro saxiixa Philippe Coutinho
Miyuu Paul Pogba Albaabada u furay inuu u ciyaaro Kooxda reer France ee Paris Saint-Germain?
Manchter City oo la wareegtay hogaanka horyaalka kaddib guul ay ka gaartay Bournemouth iyo manchester United oo guul dirqi ah gaartay
Bashiir March 2, 2019
(premier league ) 2 March 2019 kooxda Manchester City ayaa guul dirqi ah ka gaartay kooxda Bournemouth kaddib ciyaar ku soo dhamaatay 1-0.
Qeebtii koowaad ee kualna kooxda Manchester City ayaa ku dhameesatay iyada oo aan goolna dhalin wallow ay sameeyeen isku dayo badan oo gool loo filan karay .
Kooxda Bournemouth oo garoonkeeda ku ciyaareysay ayaa ku adkeesatay in shabaqeeda gool ka ilaashato qeebtii koowaad ee ciyaarta , kulanka qeebtiisa hore ayaana lagu kala maray bar baro 0-0.
Nasiino kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta wiilasha kooxda City ayaana dadaal u galay sidiii ay ku qaban lahaayeen hogaanka ciyaarta .
Riyad Mahrez oo badal ku soo galay ciyaarta ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa daqiiqadii 55-aad ee ciyaarta waxaana goolkaas ka caawiyey laacibka reer Spain ee David selva .
ugu dambeen ciyaarta ayaa ku idlaatay 1-0 City ayaana la wareegtay hogaanka horyaalka qaab kumeel gaar ah inta laga gaarayo natiijo ciyaareedka ka soo baxda kulanka Liverpoo ee Axada.
Dhinaca kale kooxda Manchester United oo garoonkeeda ku marti qaaday kooxda Southampton ayaa gaartay guul muhiim ah waxa ayna ku adkaadeen 3-2
United ayaa laga dhaliyey gool caqibad lahaa qeebtii koowaad ee ciyaarta waxaana kubad xoogan oo sida madfici oo kale shabqa ku hubsaday Yann Valery daqiiqadii 26-aad ee qeebtii koowaad ee ciyaarta , wixii ka dambeyey United ayaa awoodi weysay in ay keenaan goolka bareejada qeebtii koowaad ee ciyaarta .
Qeebtii koowaad ee kulanka ayaa soo idlaaday Southampton oo gool kaga hor kaceysa kooxda Manchester , balse markii dib la isagu soo laabtay qeebtii dambe ee ciyaarta United ayaa la timid labo goo loo deg deg ah waxaana u dhalieyey xidigeheeda kala ah Andres Preirra iyo Lukaku .
United ayaa awoodi weysay in ay difaacato goolkeeda durba kooxda Southampton ayaa la timidi goolka bareejada waxaana u dhaliyey James Ward Prowse.
Lukaku ayaa markale gaaray shabaqa waxa uuna natiijada ciyaarta ka dhigat 3-2 oo ay ku hor kaceyso kooxda Manchester United ugu dambeen ciyaarta ayaana ku dhamaatay 3-2.
kooxaha Tottenham iyo Arsenal oo is mari waayey kulankoodii North Londone Derby
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Real Madrid Vs Barcelona